Izincwadi ezi-3 ezinhle kakhulu zikaLuis Zueco
Ngahlangana noLuis Zueco ku-torrid naseZaragoza 23 Ephreli eminyakeni embalwa edlule. Abafundi abanesiyezi badlula ePaseo Independencia phakathi kwezincwadi eziningi eziboniswe ngalolo suku lukaSanta George olukhazimulayo. Abanye bacele ukusayinwa kobunzima ngenkathi abanye bebona ngakolunye uhlangothi uma kwenzeka ...
Ngelinye ilanga ngiyofika eSagres, nguNélida Piñón
Njengenjwayelo, izincwadi zokutakula Umlando. Akukho okungaba ukufunda ngokuphila kwethu kwangaphambilini ngaphandle kokuhlolwa okudingekayo kwezincwadi. Ngoba izinganekwane ezingokomlando zidlulela ngale kwemibhalo esekela izehlakalo nezinsuku zazo zamakholwa azinikele ngokusemthethweni. UNélida Piñón usinikeza ...
Ezandleni zombhali njengo Isabel Allende, umlando ufeza lomsebenzi wokusondela esikhathini esidlule esigcwele izimfundiso. Ukuthi lezo zimfundiso zibalulekile noma cha, ngoba ekuphindaphindeni amaphutha senza kahle ngokuhlehla. Kodwa hey ... Kwenzeka okufanayo kunoma yimuphi umxoxi wenganekwane yomlando. Ngoba abafundi abaningi...
Madonna Engutsheni Yoboya nguSabahattin Ali
I-Turkey ukutholakala okukhulu kochungechunge lwe-pasty lwezikhathi zakamuva. Ama-melodramas aseNingizimu Melika anikele ezindabeni zansuku zonke zeTurkey yaseYurophu. Hhayi ukuthi le noveli iyahamba, kepha kukhona okukhuthazayo ngesakhiwo. Esinye isikhathi esihlukile kepha inkinga efanayo ...
I-Awakening of Heresy, kaRobert Harris
Isikhathi sihlala sifika lapho wonke umlandi wezinganekwane zomlando aqeda ukubhekana nenjabulo yosuku ngokungabaza kwayo okungeziwe ngenxa yesimo esimnyama sezikhathi ezikude. URobert Harris wayengeke abe ngaphandle. Emphakathini lapho ukholo nezimfundiso zixoshe khona ...
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi19 Okulandelayo →